ILuz-Indlala iyasondela-Ukwehla eBukumkanini
ISt	NguLuz de Maria de Bonilla ngo-Okthobha 19th, 2021:
Abantu abathandekayo boKumkani wethu kunye neNkosi uYesu Krestu: Ndiyanisikelela ngoThando olufumaneka kuphela ngokuthembeka kuKumkani wethu.
Uzifumana ukwinqanaba xa, ngenxa yokumamela amazwi angengawo aweNkosi yethu neNkosi uYesu Krestu kunye noKumkanikazi wethu noMama, uye wavumela ukudideka, Malunga nokudideka Ukungakholelwa kunye neqhayiya lokungena kuwe, ukhupha oyena mntu umbi xa evukela ngaphandle kokungakholelwa kwiNdlu kaTata. Ujonge kumzuzu apho umntu eya kulwa nomntu, elibala ukuba usisidalwa sikaThixo, ejongene nendlala egquba uluntu nobumnyama obunzulu kangangokuba awuyi kukwazi ukubona izandla zakho - ubumnyama obufana nobo. nto leyo abantu abayithweleyo emiphefumlweni yabo ngenxa yezono ezithe gqolo abathe bazintywilisela kuzo njengobuntu.
Esi sizukulwana siya kuva ukuhlengahlengiswa kwetekhnoloji, ukuba ngabantu abangenalo ulwazi lokuba baphile njani ngaphandle kokuthuthuzelwa kwalo mzuzu. Ukuqhubeka kobomi ngaphandle kokuyeka ukuzihlola ngaphakathi kukwenza ungabinaluvelwano, kukwenza ukuba ucinge ukuba yonke into yinto nje, kwaye ke awuguquki.
Zintanda zoKumkani wethu kunye neNkosi yethu uYesu Krestu: Ilizwi leZiqu zintathu ezingcwele lilungile kwaye liyinyani. Ilizwi elidluliselwe kuwe nguKumkanikazi noMama wethu liyinyani. UKumkanikazi kunye noMama weXesha Lokugqibela… Zidenge! Isizukulwana esingendawo, hayi indlela oya kusokola ngayo! Zilungiseleleni: musani ukulibala. Amaxesha aya esiba nzima. Yintoni omele ubandezeleke ngayo into ezayo. Guqula ngoku! Jonga imeko yoluntu…. Guqula ngoku!
Ndiyakusikelela, Imikhosi yam yaseZulwini iyakukhusela. Uthando kunye nokhuseleko lukaBathathu Emnye kunye noKumkanikazi wethu kunye noMama kuhlala phezu kwakho. Yonke iNgelosi yoMlondolozi Malunga neeNgelosi eziLondoloziweyo… Kuya kufuneka uthandwe kwaye ubhence ngokholo olukhulu ngeli xesha. Ndikubiza ukuba uqhubeke uthandaza iRosari eNgcwele kunye neChaplet yeNceba kaThixo.
Bazalwana noodade: Uthando olungenakulinganiswa lukaThixo lusenza silumkiswe. Ubuntu bunenkani; masishiye elidlulileyo ngasemva, masamkele ukuthobela kwaye sizilungiselele, hayi ngokwenyama kuphela kodwa nangokomoya. Ngaphandle kokulinda ubumnyama obuchukunyiswe ngumntu, okanye ubumnyama obuxelwe kuthi yiZulu…. uguquko, uguquko! Amen.
UKumkanikazi kunye noMama weXesha Lokugqibela…
Malunga neeNgelosi eziLondoloziweyo…
exhonyiweyo NguLuz de Maria de Bonilla, imiyalezo, Iintlungu zabasebenzi.
← Ngubani uMnqandi?
Ulungelelwaniso lweMpembelelo →